कात्तिक १९, पर्वत । जिल्लाको ‘लाइफलाइन’ मानिएको कालीगण्डकी करिडोरको फलेवासदेखि अर्मादीसम्मको काम लामो समयदेखि अलपत्र परेको छ । दुई वर्षअघि नै ट्र्याक खुलिसक्नुपर्ने सडक अलपत्र परेपछि कालोपत्र गर्ने कार्यसमेत पछि धकेलिने भएको छ । निर्माणको काम गर्ने जिम्मा लिएको स...
धावनमार्ग कालोपत्र गर्न रू. ४ करोड विनियोजन
गलकोट । बागलुङको बलेवा विमानस्थलको धावनमार्ग कालोपत्र गर्न चालू आर्थिक वर्षमा रू. ४ करोड विनियोजन गरिएको छ । विमानस्थललाई बाह्रै महीना सञ्चालनमा ल्याउन धावनमार्गको स्तरोन्नति गर्नुपर्ने भएकाले उक्त बजेट विनियोजन गरिएको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले बताएको छ । २६ वर्षदेखि बन्द अवस्थामा रहेको व...
बागलुङ पर्यटन विकासमा खड्का
बागलुङ । बागलुङ पर्यटन विकास समितिको पहिलो अधिवेशनबाट राजु खड्काको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति चयन भएको छ । शनिवार सम्पन्न अधिवेशनले ७ सदस्यीय कार्यसमिति चयन गरेको हो । अधिवेशनले वरिष्ठ उपाध्यक्षमा राज थापा, उपाध्यक्षमा शेरमान घर्ती, महिला उपाध्यक्षमा भविकला रोका, सचिवमा अर्जुन चोखाल, सहसचिवमा नारायण...
फुटपाथ व्यवसाय हटाउन पोखरा महानगरको सातदिने अल्टिमेटम
कास्की । पोखराका मुख्य बजार क्षेत्रमा व्यवसायीहरूले फुटपाथ अतिक्रमण गरी व्यापार व्यवसाय गर्न थालेपछि पोखरा महानगरले तत्काल फुटपाथ हटाउन चेतावनी दिएको छ । महानगरले व्यवसाय हटाउन एक हप्ताको समयसीमा दिएको छ । पोखराको मुख्य बजार क्षेत्र महेन्द्रपुल, चिप्लेढुंगा, सिद्धार्थचोक, न्यूरोड, पृथ्वीचोक, बिरौटा...
माछापालनमा २ युवाको ३ करोड लगानी
पर्वत । पर्वतको कुश्मा नगरपालिकाका दुई युवाले माछापालनमा ३ करोड रुपैयाँ लगानी गरेका छन् । स्थानीय लालबहादुर हरिजन र दुर्गा पौडेलले कुश्मा नगरपालिका–४ अर्मादीमा बायो फ्लक्स प्रविधि भित्र्याएर माछापालन शुरू गरेका हुन् । व्यवसायमा हरिजन र पौडेलको बराबर लगानी छ । थोरै जमिनमा धेरै उत्पादन गर्नेग...
बागलुङ पर्यटन विकास समितिको अध्यक्षमा खड्का
कात्तिक १७, बागलुङ । बागलुङ पर्यटन विकास समितिको अध्यक्षमा राजु खड्का चयन भएका छन् । समितिको शनिवार सम्पन्न प्रथम अधिवेशनले बागलुङ कालिका भगवती गुठी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षसमेत रहेका खड्काको अध्यक्षतामा सर्वसम्मत १७ सदस्यीय नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको हो । अधिवेशनले वरिष्ठ उ...
नेपालमै स्नातकोत्तर तहमा सुरुङ इन्जिनीयरिङको पढाइ
कास्की । इन्जिनीयरिङ अध्ययन संस्थान पश्चिमाञ्चल क्याम्पस लामाचौर पोखरामा देशमा नै पहिलोपटक चट्टान तथा सुरुङ (टनेल) इन्जिनीयरिङ विषयको अध्यापन हुने भएको छ । पछिल्लो समय सुरुङमार्ग निर्माण योजनालाई सरकारले प्राथमिकताका साथ अघि सारे पनि देशभित्र त्यससँग सम्बन्धित जनशक्तिको अभाव रहेको छ । त्यसैले आवश्यक...
परीक्षण उडानपछि पनि हुम्डे विमानस्थलले पाएन निरन्तरता
कात्तिक १६, मनाङ । मनाङ जिल्लाको एकमात्र हुम्डे विमानस्थल परीक्षण उडानपछि पुनः सञ्चालन हुन सकेको छैन । विमानस्थल निर्माण भएको सात वर्षपछि समिट एयरलाइन्सले भदौ २७ गते परीक्षण उडान गरेको थियो । सफल उडान भएपछि खुशी भएका मनाङवासी निरन्तर उडान नहुँदा निरास छन् । पर्यटक भित्रिने समयमा...
पोखरा विमानस्थलमा स्याल आतंक, धपाउँदै बित्छ कर्मचारीको दैनिकी
कात्तिक १६, कास्की । पोखरा विमानस्थल केही दिनदेखि स्यालको क्रिडास्थल बनेको छ । विमानस्थलको धावनमार्गमै स्याल दौडिन थालेपछि कर्मचारीसमेत हैरान भएका छन् । विमानस्थल क्षेत्रमा केही समयदेखि स्याल दौडिन थालेपछि जहाज उडानमा समस्या भएको छ । कात्तिक लागेपछि धावन मार्गमै स्याल दौडिँदा जोखिम बढेको पोखरा वि...
कात्तिक १६, गलेश्वर(म्याग्दी) । झण्डै डेढ दशक विदेशमा पसिना चुहाएर काम गर्दा पनि पैसा बचाउन नसकेपछि आफ्नै देशमा फर्केर मौरी पाल्न थालेका म्याग्दीका एक किसान राम्रो आम्दानी गर्न सफल भएका छन् । म्याग्दीको मंगला गाउँपालिका–१, कुहुँका कृषक गोविन्द खत्रीले वैदेशिक रोजगारीबाट घर फर्किएर व्य...